Halkuu Maraya Ganacsiga Filmada Padmaavat, Padman Iyo Aiyaary Gudaha India! – Filimside.net
February 26, 2018 Ali Aadan
Taariikhda: February 26, 2018
Ganacsi sare u kac, gaabis iyo dhex dhexaad ah aye wada sameyeen filmada Bollywoodka ee kala ah Padmaavat, Padman iyo Aiyaary kuwaaso wali tiyaatarada saaran.
Padmaavat ayaa ganacsi wacan sameyay todobaadkisa shanaad sedexda maalmod ee ugu horeysay isagoo keenay lacago ku dhow 4 Crore waana ganacsi heer sare ah marka loo fiiryo in todobaadkisa 5aad yahay sido kalena tiyaatarada filmo kale saaranyihiin.
Padmaavat waxuu cagta mariyay iskoorada filmada hindiga ah ka dhigeen gobolada Maharshtra iyo Nizaam/Andhara marka Baahubali 2 meel la iska dhigo balse aflaamta kale halkaas wuu ku garaacay ee Bollywoodka ah.
Sido kale Mumbai kaliya 110 Crore ayuu kakeenay filmkaan isagoo marhore dhaafay iskooradii filmada Dangal, PK iyo TZH oo darajda 100 ka keenen Mumbai.
Wadarta Guud ganacsiga Padmaavat mudo 4 todobaad iyo sedex maalmod waxuu maraya 273.64 Crore (Trade Figure) waxuuna u muuqda in cimri ahantisa ku istaagi doono 280 Crore.
Dhanka kale filmka Padman ayaa keenay 2-2.50 Crore maalinti shalay ahed waxuuna ganacsigiisa maraya ilaa haatan 78 Crore mudo 17 maalmod ah waana ganacsi iska dhex dhexaad ah.
Padman waa mashruuc guulestay balse aan la hubin inuu Hit dhamestiran noqonaayo hase ahaate rajo lagama qabo inuu Hit noqonaayo waxaana halkaas kusoo idlaaday Hit-kii taxanaha ahaa ee Akshay Kumar soo waday maadama 5 film isku xigto Hit dhamestiran ka dhigay waxaana muuqata in ilaa 82 Crore uu gaari doono ganacsiga Padman cimri ahaantisa.
Ugu Damabeyn Aiyaary waa mashruuc bur buray maadama ganacsi gaabis ah uu sameyay todobaadkiisa kowaad.
Waxuuna maalinti shalay ahed keenay 75-80 Lakh lacago u dhaxeya waana lacag aad u yar maadama mudo 10 maalmod ah uu tiyaatarada saaranyahay waxuuna hader ganacsiga guud maraya 17 Crore waana mashruu guul darestay oo an wax rajo ah laga qabin.